उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया विरोधी प्रचार गर्न जडान गरेको लाउडस्पिकर हटायो ! – korea pati
June 27, 2020 Korea patiLeaveaComment on उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया विरोधी प्रचार गर्न जडान गरेको लाउडस्पिकर हटायो !
प्योङयाङ विरोधि गतिविधि चर्किएकै कारण उत्तर कोरिया दक्षिण कोरियासँग रुष्ट बन्यो ।
किमले सैन्य गतिविधि तत्कालका लागि बन्द गर्ने बताए सँगै उत्तर कोरियाली सैनिकहरुले अफवाह फैलाउन राखेका ठूला ठूला लाउडस्पिकरहरु समेत हटाएका छन् । सिमा क्षेत्रमा परिचालन गरिएका सैनिकहरुलाई समेत फिर्ता लैजाने उत्तर कोरियाले बताएको छ ।